Social Media maka mmalite: Mwepụta, Nkesa, Buzz na Bucks | Martech Zone
Social Media maka mmalite: Mwepụta, Nkesa, Buzz na Bucks
Anyị kesara ndepụta mara mma nke 40 + saịtị iji kwalite mmalite gị na ị kwesịrị ịlele (ma chọpụta) ka ị na-eme atụmatụ mwepụta nke mmalite nke gị.
A ka nwere ọtụtụ ọgba aghara gburugburu iji mgbasa ozi mgbasa ozi iji nweta okwu banyere mmalite gị. A ka na-enwekwa echiche ụfọdụ na-atọ ụtọ na nke mbụ na iji ya. Nke a infographic si Udemy na-egosi otu ị - dị ka mmalite - ị nwere ike isi zụọ ahịa ahịa mgbasa ozi dị ka ngwa ọrụ iji bulie azụmaahịa gị yana ihe kpatara ị ga-eji chọọ itinye ego na ọzụzụ ụfọdụ soshal midia iji ruo ọsọ.
Otu igodo na-efu ebe a bụ tupu-malite. Ọ bụrụ na ị na-aga ire ahịa mmalite gị site na mgbasa ozi mmekọrịta, aga m agba gị ume ka ị nwee mmemme mbido na ndị ọrụ beta iji nyere aka ma wulite gburugburu mmalite gị yana ịnweta nzaghachi dị egwu.
Anyị na-arụ ọrụ CircuPress n'ihi na a afọ ugbu a na ọ bụ ka a na-eto eto mmalite n'agbanyeghị nwere ihe karịrị 1,500 nrụnye. Nzaghachi anyị na-enweta n'aka ndị ọrụ bụ ihe ịtụnanya na anyị na-aga n'ihu na-emezi ọrụ ahụ, bulie akụrụngwa ma kwadebe maka mbido buru ibu karị. Agbanyeghị, anyị agaghị egbutu ọtụtụ oge na ego na ntinye ahụ ruo mgbe anyị matara na ọrụ ahụ kachasị mma - n'ihe metụtara ahụmịhe onye ọrụ na akụrụngwa.
Otu n'ime igodo dị ukwuu nke ha ji asọ oyi na-ege ntị na nzaghachi ị na-enweta gbasara ikpo okwu gị. Anyị na-ahụkarị njikọ dị n'etiti ihe mmalite na-eche na ha na-eme ihe ndị ọrụ nwere ekele maka ha. Ilekwasị anya na uru ndị ọrụ gị na-enye site na nzaghachi ha bụ ụzọ dị mma iji mee ka akara doo anya maka ụdị ị na-eweta.
Ndụmọdụ ikpeazụ bụ iji hụ na ị nwere nkwado ma ọ bụ mmemme mgbakwunye iji gbasaa, ihe ozi oku na-akpọ, okwu nke pịa. Ọtụtụ mmalite na-ahụ ndị ahụ dị ka ihe ha ga-eme ma emechaa mbido, mana anyị na-akwanye ndị ahịa anyị ume ime ya dị ka akụkụ nke mmalite ahụ. Iwulite ọtụtụ ngwa ọrụ ndị a mechara sie ike, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọ dị ha mkpa itinye ya na ngwa gị.
Tags: Buzzelekọta mmadụ mgbasa ozi uzumgbanwe mgbasa ozimgbasa ozi mgbasa ozi maka mmalitenkesa mmalitemmalite mmaliteahia mmaliteUdemy
CommerceHub: andmụbawanye, Nkwalite, Mezuo ma Nyefee
Ihe kpatara I Ji Kwalite Kaadi Gị Swipe ka EMV